pamusoro gumi yakavhurika sosi yekuita ekuyedza maturusi
Kuru Kuita Wepamusoro gumi Akavhurwa Sosi Performance Kuedza Maturusi
Kuyedza kwekuita kuri kuita chikamu chakakosha chegadziriro, saka zvakakosha kuti uzive maturusi ari kunze uko. Iyi posvo iine runyorwa rwepamusoro gumi yakavhurwa sosi yekuyedza kuita maturusi
Vhura Sosi Performance Performance Kuedza Maturusi
Iyo Apache JMeter application ndeye yakavhurwa sosi software. Iyo yakachena Java application yakagadzirirwa kurodha bvunzo chikumbiro uye kuyera mashandiro ayo. Verenga Zvakawanda »
Kukweva chishandiso chakanyanya kugona kuyera mutoro. Yakagadzirirwa kurerukirwa kwekushandisa, kuchengetedza uye kuita kwakanyanya. Verenga Zvakawanda »
Mhashu chiri nyore kushandisa, chakagoverwa, mushandisi mutoro wekuyedza chombo. Iyo inoitirwa kuitisa-kuyedza mawebhusaiti (kana mamwe maratidziro) uye kuona kuti vangani vashandisi venguva imwechete system inogona kubata. Verenga Zvakawanda »
Tsung ndeye yakavhurika-sosi yakawanda-protocol yakapihwa mutoro wekuyedza mutoro. Inogona kushandiswa kushungurudza HTTP, WebDAV, SOAP, PostgreSQL, MySQL, LDAP, MQTT, uye Jabber / XMPP maseva. Verenga Zvakawanda »
Kukombwa ndiko kuongororwa kweHTTP uye yekushandisa mabhenji. Kukombwa kunotsigira kusimbisa kwechokwadi, makuki, HTTP, HTTPS uye FTP protocols. Inoita kuti mushandisi wayo arove sevha ine nhamba inogadziriswa yevatengi vakateedzera. Verenga Zvakawanda »
Httperf chishandiso chekuyera webhu server kuita. Iyo inopa inoshanduka nzvimbo yekugadzira akasiyana HTTP ebasa rekuita uye yekuyera server kuita. Verenga Zvakawanda »
Kunyangwe isina kunyatso kuenderana nekuedzwa kwePerf, Taurus inopa otomatiki-hushamwari fomati yekuenderera kunoedzwa, kusanganisira kushanda uye kuita. Verenga Zvakawanda »
Artillery ndeyemazuvano, ine simba & nyore-kushandisa mutoro kuyedza uye unoshanda wekuyedza ekushandisa. Ishandise kutumira zvinotyisa zvinoshandiswa zvinogara zvichiteedzera & kusimba pasi pemutoro wakakura. Verenga Zvakawanda »
Goad inotora mukana uzere wesimba reAmazon Lambdas yekuparadzira mutoro kuyedza. Unogona kushandisa goad kuvhura mitoro yeHTTP kubva kumatunhu mana eAWS kamwechete. Gwayana rega rega rinogona kubata mazana ekubatana panguva imwe chete, richikwanisa kuzadza mizhinji yepamusoro kusvika Zviuru zana zvezvikumbiro panguva imwe chete . Verenga Zvakawanda »
ab chishandiso chekumisikidza yako Apache Hypertext Transfer Protocol (HTTP) server. Iyo yakagadzirirwa kukupa iwe fungidziro yekuti yako yazvino Apache kuisirwa inoitwa sei. Verenga Zvakawanda »
Apple Watch Series 5 vs Samsung Galaxy Tarisa Inoshanda 2
T-Mobile inosundira nyowani yaNovember yekuvandudza yeGPS S7 uye S7 muganho
LG V20 bhatiri yehupenyu bvunzo mhedzisiro yabuda: heino & maapuro kuti inofananidzwa sei neApple & apos; s iPhone 7 Plus uye Samsung & apos; s Galaxy S7 Edge
Yakanakisisa Buy dhizaini: Tenga iyo Samsung Galaxy S7, tora yemahara 256 GB memori kadhi
Akanakisa Apple Watch mabhendi
Verizon & apos; inofarira mwana GizmoWatch inoshamisa simba uye LTE-inogoneswa
T-Mobile inowedzera yakasimba Sprint LTE network yekudzima zuva kune yakasimba 5G ukuru hwehurongwa